राहत बाँड्दै जाँदा प्रेम, लकडाउनमै अनिल र निलमले गरे बिहे - Everest Dainik - News from Nepal
राहत बाँड्दै जाँदा प्रेम, लकडाउनमै अनिल र निलमले गरे बिहे
कानपुर । मन मिलेपछि कसको के लाग्छ र ? अर्को कुरा जीवनसाथी कहाँ भेटिन्छ भन्ने कुरा कसलाई थाहा हुन्छ र ? यस्तै भएको छ निलमको जीन्दगीमा । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपुर यस्तै फिल्मी घटना घटेको छ ।
लकडाउनको बेला एकजना युवकले आफ्ना मालिकसँग बेसहारा व्यक्तिहरुलाई खाना खुवाउँदै आएका थिए । खाने खाने ताँतीमा एकजना युवती पनि हुन्थिन । सधैं खाना बाँड्ने क्रममा युवक र युवतीबीच प्रेम शुरु भयो ।
शहरमा बस्ने निलमका बुवाको सात वर्ष अघि देहान्त भएको थियो । आमा भने प्यारालाइसिस पीडित छिन् । उनका कैयन अंगले काम गर्दैन । केही समय अघि उनका दाई र भाउजुले बहिनी र आमालाई कुटपीट गर्दै घरबाहिर निकाले
याे पनि पढ्नुस लकडाउनका बेला तस्करी गर्न बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गर्ने २८ तस्कर पक्राउ
बिरामी आमाको एकमात्र सहारा निलम थिइन । यसैबीच लकडाउन सुरु भएपछि दुबैको जीवन निकै कष्टप्रद बन्न पुग्यो । त्यत्तिकै घरमा बसे भोकै मर्नुपर्ने देखिएपछि निलम साँझ बिहान खाना बाँडिने लाइनमा बस्न थालिन् । आमाका लागि पनि उनले खाना लगेर जान्थिन ।
याे पनि पढ्नुस ‘लकडाउन’ थप प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
उता पुरानो कानपुर निवासी अनिल पनि आफ्ना मालिक लालता प्रसादसँगै लकडाउनमा सधैं खाना बाँड्थे । लालता प्रसाद जान नपाएको दिन अनिलले नै एक्लै लन्च प्याकेट बाँड्ने गर्थे ।
एकदिन लाइनमा नयाँ युवती देखेपछि अनिलले यी युवती राम्रै घरकी भएर पनि परिस्थितिवश यहाँ आएको विचार गर्यो । त्यसपछि निलमसँग उसको कुरा हुन शुरु भयो । र, उनीहरुबीच लकडाउनमैं प्रेम शुरु भयो ।
प्रशासनले कडाई गरेपछि अनिल आफै निलमको घरमा खाना पुर्याउन थाले । यही बीचमा उनीहरुले विवाह गर्ने निर्णय गरे । अनि बुद्धको मुर्तिलाई साक्षी राखेर दुबैले जन्म जन्मान्तर सँगै मर्ने बाँच्ने कसम खाए ।
याे पनि पढ्नुस श्रीमतीलाई अस्पताल राखेर ब्लड बैंक हिँडेका वृद्धलाई सेनाले नांगै बनायो
निलम भन्छिन्, “म भगवानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, घरको अवस्था देखेर मैले बिहेबारे सोच्नै छोडिसकेकी थिएँ । अनिलसँग मेरो बिहे होला भन्ने त कल्पना पनि थिएन । अनिल जस्तो सफा मनको मान्छे पाउनु मेरा लागि भाग्यको कुरा हो ।” एजेन्सीहरुमा प्रकाशित समाचारका आधारमा
ट्याग्स: Corona India, बिहे, राहत, लकडाउन
सोमबार कस्तो बित्दैछ तपाईंको दिन ? पढ्नुस् राशिफल
रिपोर्ट नेगेटिभ आएको खबरपछि ढुक्क भएर घर फर्केका युवकमा देखियाे संक्रमण
कान्तिपुरः महामारीको बेला सरकारले काम दिन सकेन, ३ सय बढी रेजिडेन्ट डाक्टर घर फर्कंदै